राष्ट्रिय Archives - Page2of 142 - Nepal News Post::Nepal News Post, online news portal
किन भत्काए स्थानियले धुर्मुस/सुन्तलीले निर्माण गरिरहेको क्रिकेट रंगशाला ?
चितवनमा धुर्मुस सुन्तलीद्धारा निर्माण भैरहेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला स्थानीयले भत्काएका छन्। स्थानियले बुधबार बिहान रंगशालाको बार र संरचना भत्काइएको हो । रामपुर कृषि क्याम्पसका लागि अधिग्रहण गरेको जग्गामा क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्न थालेपछि विवाद भएको थियो। केही स्थानीयले रंगशालाको बार र निर्माण गरेको भौतिक संरचना भत्काएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ। बार भत्काउने केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीद्धारा घटनाको...
नमस्कार, मेरो नाम सुप्रीया भिटवाल हो, मेरो उमेर २६ वर्ष भयो । मलाई पुरुससँगको सम्भोगमा पुरुष स्खलित हुँदा म उसको विर्य खाने गर्दछु । केटाको विर्य खाँदा मात्रै मलाई यौन आनन्द मिल्छ । डाक्टर साब यसरी विर्य खाँदा कुनै शारिरिक हानी नोक्सानी गर्द कि गर्दैन ? साथैं यसरी विर्यपान गर्दा महिलाको मोटोपनमा बृद्धि हुन्छ भन्छन् यो सत्य हो कि होईन...
क्यारेबियन प्रिमियर लिग सीपीएल टि-२० को ड्राफ्टबाट नेपाली सन्दिप लामिछाने महँगो मूल्यमा बिक्रि भएका छन्। प्रतियोगिताको लागि खेलाडी छनौट गर्न इंग्ल्याण्डमा जारि ड्राफ्ट मार्फत सन्दिपलाई बार्बाडोस ट्रिडेन्टसले टिममा लिएको हो। सीपीएल टि-२० को अघिल्लो सिजन सन्दिपलाई सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस प्याट्रीएट्सले खरिद गरेको थियो। यो सिजन सन्दिपलाई बार्बाडोसले ठुलो मूल्यमा टिममा लिएको छ। अघिल्लो सिजन ५ हजार डलरमा बिक्रि भएका नेपाली...
मुलुकको यथार्थ बोकेको लोकगीत-‘ लाज मर्दो बनाई छाड्यौ, नेपाली हुँ भन्नलाई( (भिडियो सहित)
टोकियो । मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई ईंगित गर्दै गायकद्वय अमित सापकोटा र खेमराज पौडेलले – ‘लाज मर्दो बनाई छाड्यौ, नेपाली हुँ भन्नलाई’ बोलको गीत बजारमा लिएर आएका छन् । गीतमा गायक द्वयअमित सापकोटा र खेमराज पौडेलको स्वर रहेको छ भने लय अमित सापकोटा तथा शब्दमा अमित सापकोटा र खेमराज पौडेल को रहेको छ ।गीतलाई एआर क्रियसनले बजारमा ल्याएको छ भने गीतको छायांकन...
यसकारण मलेसियाको रोजगारी नखुलेको रहेछ ! के अब खुल्ला त ?
काठमाडौँ । रोजगारीका लागि मलेशिया जाने नेपालीहरूमाथि विभिन्न सेवाप्रदायक कम्पनीबाट आर्थिक भार थोपरिएको भन्दै सरकारले त्यस्तो व्यवस्था नहटुन्जेल कामदार मलेशिया पठाउन रोकेको पनि यो साता एक वर्ष पुगेको छ। झन्डै पाँच लाखभन्दा धेरै नेपाली कार्यरत रहेको र बर्सेनि दशौँ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिने मुलुकमा कामदार पठाउन रोकिएपछि त्यहाँ नेपालीका लागि रोजगारीको अवसर खुम्चँदै गएको छ। गएको वर्ष श्रम, रोजगार तथा सामाजिक...
दिल्लीमा एक नेपाली महिलाकाे सामूहिक बलात्कार
नेपालकी एक २४ वर्षीया महिला दिल्लीमा सामूहिक बलात्कारको शिकार भएकी छिन् । काठमाण्डौबाट आफ्नो भाइलाई भेट्न मुम्बई जाने क्रममा ती महिला चार जना पुरुषबाट बलात्कृत भएकी हुन् । दिल्ली प्रहरीले ती चार जना पुरुषविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । ती महिलाले आफूलाई बलात्कार गर्ने पुरुषहरुको नाम पनि प्रहरीलाई दिएकी छिन् । उनले ती पुरुषमध्ये एक जनाको फोन नम्बर पनि प्रहरीलाई...
भारतीय चुनाबको असर नेपाली भान्सा सम्म
भारतमा जारी लोकसभाको चुनावको प्रभाव नेपालको भान्सासम्म परेको छ । विभिन्न राज्यमा छुट्टाछुट्टै भएको चुनाका लागि नेपाल–भारतबीचको नाका बन्दा हुँदा तरकारी आयात रोकिएकाले तरकारीको मूल्य शतप्रतिशतदेखि १५८ प्रतिशतसम्मले बढेको हो । भारतीय बजारबाट ल्याइने स्याउलगायतका फलफूलको मूल्यसमेत आकासिएको छ । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छ । कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिको आइतबारको मूल्यसूचीअनुसार भान्साको अनिवार्य उपज गोलभेडा (ठूलो)...
नेपाल र कम्बोडियाबीच व्यापार विस्तार गर्ने समझदारी, यस्तो विस्तृत
काठमाडौं । नेपाल र कम्बोडियाले द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने र व्यापार विस्तारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने विषयमा सहमति गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कम्बोडियाको औपचारिक भ्रमणका अवसरमा दुई देशबीच द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव केदारबहादुर अधिकारी र कम्बोडियाका उद्योगमन्त्री सुय सेमले व्यापार तथा लगानी ढाँचासम्बन्धी सहमतिमा हस्ताक्षर गरे । त्यसैगरी नेपाल...
म्यानपावर कम्पनिहरुमा छापा, भेटियो यस्तो कर्तुत्
काठमाडौं । सोमबार वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसाल आफैं म्यानपावरहरुको अनुगमनमा निस्किए । विभागमा आएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने गरी विभन्नि काम थालेका भुसालले सोमबार आफैं अनुगमनमा निस्किएर कर्मचारीलाई नतिजामुखी अनुगमनको विधि सिकाए । दिउँसो अनुगमनमा निस्किएका विभागको टोली सुरुआतमा एयरपोर्ट नजिकैको ‘स्काई अफ दि वर्ल्र्ड म्यानपावर’मा पुग्यो । टोलीलाई देख्नासाथै म्यानपावरको सञ्चालक र कर्मचारीहरुको हच्किए...
‘को बन्छ करोडपति’मा करोड जित्ने राजीव को हुन् ? जसले पाउँदैनन् पूरा रकम, कारण यस्तो छ
काठमाडौं / एपी वान टेलिभिजनमा प्रशारण भइरहेको ‘को बन्छ करोडपति’को पहिलो शृंखलामा पहिलो शृंखलामा पहिलो करोड जित्ने शौभाग्य विराटनगरका राजीव जैनले प्राप्त गरेका छन् । उनले एक करोड रुपैयाँ जितेर यो फ्रेञ्चाइजमा आफ्नो नाम लेखाउन सफल भएका छन् । शनिबारको एपिसोडमा उनले निरन्तर १३ प्रश्नको सही जवाफ दिँदै २५ लाख जित्दा निर्धारित समय सकिएको थियो । त्यसपछि आइतबार बाँकी २ वटा...